Photo collage Samaynta Fikradaha | Talooyin in Samee Photo collage
> Resource > Talooyin > Photo collage Samaynta Fikradaha iyo Talooyin
Collage sawir A waxaa la samayn karaa ilaa of theme kasta oo sida ay ku fikirayaan. Fikrado Photo collage Isboortiga ciyaaro xasuus ilmaha, qoyska dhacdo, fasaxa xagaaga , dib dugsiga, ama nolosha sanadka ugu horeeya ilmaha ah ee, tallaabada ugu horeysay ee ilmahaaga, xusuus arooska ...... daqiiqad kasta waxay noqon kartaa fikrad fiican collage qaadashada sawir .
Iyadoo si fudud loo isticmaali gaare collage sawir for Mac iyo qaar ka mid ah hal abuur leh fikrado collage sawir , waxaad samayn kartaa
hadiyado sawir ,
qoyska collages geed sawir ,
derbiga sawir collage ,
facebook collage sawir ,
buugaagta sawir ,
gudahood qasabno yar mouse!
Photo collage Fikradaha - Sida gaar Photo Gift
Collage Sawir waa hibo gaar ah oo nolosha sixir waxay keentaa xusuus aad caado ka mid bandhigay. Sii gacaliye aad ah hadiyad shakhsi sawir collage cajiib ah in la siiyo xiriiri shakhsi ama si ay u muujiyaan jacaylka aad, soo dir aad rabto iyada oo Christmas Salaan Card, Waxaad ku mahadsan E-card , Card Hambalyo iwm
U sheeg sheekada maalinta arooska iyo muujiyaan oo dhan xusuus aad jeceshahay maalintaas wixii ka dambeeyey. Tus off tconvert in uu nool yahay. Kaag iyo farxadda ah midaynta qoyska maalin kasta. Iyada oo software ah collage sawir abuure dhow dahay, iyadoo qaar ka mid ah collage sawir iyo sawrirrada fikrado, waxaad soo bandhigi kartaa xasuus ku faraxsan adigoo sawir si fudud collages.
Photo collage Fikradaha - Family Tree Photo collage
A geed qoyska waa qaab si ay u matalaan taariikhda qoyskaaga. Iyada oo geed qoyska, kuwii abtiriskooda lagu qoyskaaga waa si cad u sheegay in aad ka heli karin xididka. In dunida maanta, ee geed qoyska ugu dheer waa in falsafo Shiinaha iyo baraha Confucius (551-479 CH). Geed qoyska waxay dhererantay ka badan 80 ab, oo ay ku jiraan in ka badan 2 milyan oo xubnood. Si kastaba ha ahaatee, tutorial this baro ma in aad geedka sida qoyska ka mid ah. Halkii, waxaan kaliya ka dhigo mid fudud collage qoyska geed sawir xusuus Aabayaalkanno oo Sidaas fog ma in xoogaa tallaabooyin ah.
Photo collage Fikradaha - Wall Photo collage
Ha aad qabto derbiga madhan waa weyn, lakiin ma collage weyn sawir inuu falo la? Urursada oo dhan suubbiyey ka collages sawir, boodhadh iyo sawirada in ay qurxiyaan aad derbiga u muuqataa in fikrad collage sawir wanaagsan u noqon. Haddii aadan haysan collages kasta, sameyso kaliya collages kuu gaar ah leh aad ugu jeceshahay Mac collage kii sameeyey . Eekow sariirtaada midabka ah si looga fogaado fowdo muuqaal ah. Cabir baxay degaanka derbi aad collage, iyo sidoo kale isku qiyaas bay ku yaal dabaqa. Markaas, wixiise aad sawiro aad degan tahay in gudahood. Dhawr daqiiqo ka dib, aad collage derbiga sawirka waxaa loo sameeyaa.
Photo collage Fikradaha - Facebook Photo collage
Ka dib markii aad abuurin collage sawirka shakhsi oo ii soo dir, adigoo emails, disk ama xataa FTP. Laakiin hadda aad leedahay doorasho fiican, in uu yahay, sawir collage Facebook. Facebook waa meel saaxiibada fasalka, halkaas oo aad la wadaagi karto collage sawir ee album Facebook ama Wall Facebook ah. Ayaa hal dhibic ka sii muhiimsan waa in aad si joogto ah ula soo xiriirto saaxiibbadiis oo dhammu. Laakiin sida loo sameeyo collage ah facebook? Halkan waxaan ku heer sare ah, ku talin Wondershare Photo Collage Studio aad kee baa ah kii sameeyey collage facebook fudud oo xiiso leh si ay u sameeyaan collage facebook sawir.
Fikradaha kale Photo collage u xaalado kala duwan
Fikrado Photo collage ayaa diyaar u ah dhalashada, Maalinta Hooyada, Maalinta Aabbahay, Wedding, dabbaaldegyada, Qalin, Christmas, iwm Hoos waxaa ku qoran collage sawir ome samaynta fikrado kala duwan.
Sanadguurada Picture collage
Qoyska Photo collage
Fasax Picture collage
Dhalashada Photo collage
Caruurta Picture collage
Malabka Picture collage
Roob ah ama Xisbiyada Photo collage
Orodo, Ad Picture collage
Qalin Photo collage
Play School ama Gabadhan Photo collage
Quraan Picture collage
Tartan rasmi Event collage
Butros Photo collage
Sida loo soo dir Wararka Kediska via Email
iPhoto in Picasa: Dhoofinta iPhoto Pictures in Qaasaali Picasa